War Deg Deg Ah:Khasaare Xoog leh Oo Xalay Ka Dhacay Puntland Dhimasho iyo Dhaawacba leh, | khaatumonews
War Deg Deg Ah:Khasaare Xoog leh Oo Xalay Ka Dhacay Puntland Dhimasho iyo Dhaawacba leh,
May 18, 2018 - 2 Aragtiyood
Faahfaahino hordhac ah ayaa ka soo baxaya khasaarahaka dhashay duufaano wata roobab iyo dabeylo xoogan oo ku dhuftay degaano hoos taga maamulka Puntland.
Duufaantan ayaa saameysay degaano badan, waxaana jira meelo ay ka go’day isgaarsiinta oo aan la ogeyn dhibaatada ay ka geysatay.
Daad xoog leh ayaa la soo sheegayaa inuu la tegay gaadiid marayey wadada u dhexaysa magaalooyinka Boosaaso iyo Qardho, waxaana daadku qaaday gaari ay lix qof saarnaayeen, dadkaasi waxaa nolol lagu helay afar ka mid ah labadii kale iyo gaarigii ayaa lala’yahay.
Gaari kale oo isna biyuhu shil ku geliyeen halka loo yaqaano meermeerka oo ku dhow Boosaaso ayaa waxaa ku dhintay Allaha u naxariistee ganacsade Abshir Jaamac Faarax dad kalena waa ku dhaawacmeen.
Guddoomiyaha Gobolka Bari ayaa sheegay in hada la amray laamaha amniga iyo baraha kontorool in la hakiyo isu socodka gaadiidka iyo dadka inta ay socdaan roobabka iyo daadadka. .
Waxaa la soo sheegayaa oo kale in dad badan ku xaniban yihiin wadada u dhexeysa Boosaaso iyo Qardho, dadka iyo gaadiidkooda ayaa dhinacyada ka jooga Togaga Ceeldaahir, Buuraan iyo labo wanley, halkaasi qoloba ay meel biyuhu ku go’doomiyeen.
Xasuuqa Leelkase, weerarki bahalnimada aha ee caruur dumar iyo ciroole loogu geystay Qoriley, lacsgta gaalada loogaga raadinayo xasuuqa beeralayda Galgala oo argagaxiso lagu tilmaamay, ma in aan Illahay arkayn baa moodayeen Majerteen???
Hadi Majerteen islaha beeniya jiritaanka Illahay ha ogaadan in Illahay jiro maantana uu ka jarayo Majerteen dembiga ka galeen muslmiinta Soomaalida ah.
Maalinta xabashids ku soo hogaaminayseen Muqdisho ma in aan Illahay idin arkayn baa moodayseen?
Maalinti aad ciidanka Galmudug ku xasuuqdeen Mudug idinko adeegsaday ciidanka cirka Mareykan adeegsaday ma in aan Illahay idin arkayn baad moodeen?
Cadhada Allah idin ku dhacday. Mana dhowa maaliintaad dhibka ka bixi lahaydeen, hada bilowgi ah. Maabka aduunka la idin ka masaxayaa.
Inan gumeed laangaab Leelkase ayaa tahay ama mooryaanta galnus ciil uu dhimo laangaab mooryaan